ဗီဒီယိုများ - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
YBOP ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်5ဗီဒီယိုများ:
Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်: အဦးနှောက်အပေါ်အင်တာနက်က Porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (2015)။ အင်တာနက် porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် rebooting ၏ယေဘုယျခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။
porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် (2014)။ porn- သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ & rebooting ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် 2013 (Highspeed အင်တာနက်က Porn တွေ့ဆုံ) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်၏သိပ္ပံသို့ Delves ။
မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု (2012) ။ တစ်ဦးကပိုပြီး ပြီးပြည့်စုံသောဗားရှင်း Gary ၏ TEDx ဆွေးနွေးချက်။
သင်က Porn အကြောင်းသိထားသည်မဟုတ်သောအရာတို့ကို (2010)။ ကလေးတွေအဘို့, အသက်အရွယ် 8-11 ။
အောက်ကဗီဒီယိုများကိုသင်စွဲ, porn စွဲ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နှင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်ပြဿနာများ၏ဦးနှောက်သိပ္ပံနားလည်ကူညီပေးပါမည်။
သိပ္ပံ - Porn ကြည့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်
အမေရိကန်ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအစည်းအရုံးညီလာခံ, မေလ 6-10, 2016 မှာတင်ဆက် porn-သွေးဆောင် ED ။ ဆီးရောဂါပါရဂူ Tarek Pacha by: အပိုင်း 1, အပိုင်း 2, အပိုင်း 3, အပိုင်း 4.
ညစ်ညမ်းများ၏ပျက်ဆီးလေ့လာနေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြသူကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူက Short အင်တာဗျူးများ.
PORN ဒဏ္Gာရီများ - Gabe Deem ၏စွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနောက်ကွယ်မှအမှန်တရား naysayers ဒါမှမဟုတ်မသိဘဲနေဖြင့်ရရှိစေရန် 10 လူကြိုက်များဒဏ္ဍာရီ Debunking ။
porn သုတေသန: အဖြစ်မှန်သို့မဟုတ်ထူးအိမ်သင်? ဂယ်ရီ Wilson က (2018) - ၂၀၁၈ တင်ဆက်မှုတွင်ဂယ်ရီ Wilson ကလေ့လာချက် ၅ ခုနောက်ကွယ်မှအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်သည်မှာဝါဒဖြန့်ချိသူများကသူတို့၏အခိုင်အမာထောက်ခံချက်များကိုထောက်ပြရန်မှာညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိခြင်း၊
porn သိပ္ပံနှင့်သိပ္ပံ Deniers: မာကု Queppet အင်တာဗျူးများဂယ်ရီ Wilson က (ဇူလိုင်လ, 2019)
Jacon Hess PhD မှ“ လူများသည် Porn-Science သိပ္ပံပညာကိုမြင်သောအခါယင်းကိုမြင်သောအခါအသိအမှတ်ပြုသည်” - 2018 NCOSE ညီလာခံတွင်တင်ပြခဲ့သည် "astroturfers" က)
TED ဟောပြောချက် - အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကက်စ်မစ်ဒ်က“ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ”
အပြာစာပေစွဲသိပ္ပံ (SFW) - AsapSCIENCE:3မိနစ်ဗီဒီယိုက။ က Short နှင့်အမှတ်ရန်။
Porn မကောင်းပါကိုသင်သည်ဖြစ်သနည်း ဒွန်ဟီလ်တန်, MD (2014)
ဗီဒီယို: ဘာကြောင့်လဲ Porn အတွက်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲ [SFW] (၂၀၁၇) လူကြိုက်များသောယူကျု့ချန်နယ်မှ“ငါသင်ယူပြီးပြီ။ "
နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်ဗီဒီယို: လက်ခံရရှိ Porn အကဲခတ်ဖြောင့်ယောက်ျားများ? သူတို့ကဂေးဖြစ်ပါသလား
“ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်စွဲရောဂါ၏ဆိုးကျိုးများ” (ဆေးဝါးဗေဒပညာရှင်၏ဗီဒီယို)
Paula ခန်းမအားဖြင့်လိင်နှင့် Porn စွဲများအတွက်တစ်ဦးကစိတ်မြေပုံ,
Porn သင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိုက်ကိုဘောင်ခတ် (တင်းမာမှု) ပြောင်းလဲနေသည်
ညစ်ညမ်းစွဲ: neuroplasticity များ၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတစ်ဦးက supranormal လှုံ့ဆော်မှု - ဒေါက်တာ Donald ဟီလ်တန် (2014)
porn ရဲ့ ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်းပြောဆိုပါ, neurosurgeon Donald ဟီလ်တန် MD ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမိဘများနှင့်ကလေးများမှာရည်ရွယ်ပြီးနှင့် hypofrontality နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်အပေါ်သုတေသနအာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
porn သင့်ဦးနှောက်ကျဉ်းမြောင်း! Discovery သတင်းများအားဖြင့် porn-သွေးဆောင် ED ဆြေးြေိံးနှင့် ဒီလေ့လာမှုက
Neurobiologist သည် porn ၏ ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆွေးနွေးသည်ဖြေ - သိပ္ပံကခိုင်မာပြီးရှင်းလင်းတယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုရေးသားသူဝီလျံစထရတ်စ်သည်ဘာသာရေးဆိုင်ရာအကိုးအကားအနည်းငယ်သာကျသည်။
ယောက်ျားများ ?: ဖိလိပ္ပု Zimbardo ၏နိဂုံးကို: TED မှခေါင်းစဉ်အရလူငယ်များ၏နိဂုံးချုပ်အကြောင်းပြောဆိုသည်။ Zimbardo အင်တာနက်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများ) ကို“ နှိုးဆွမှု” အဖြစ်ပြောဆိုသည်။
NoFap သလားအဘယ်သူသည်ပြည်သူ့အောင်မြင်သောဖြစ်လာအဘယ်ကြောင့် - အင်တာနက် porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထူးခြားစွာယူသည်။
Charleston ၏ကောလိပ်: နောဧသည်ဘုရားကျောင်းနှင့် Todd မတ်ေတာသညျ (ဗီဒီယို)
စွဲလမ်းမှု၏အမှန်တရားအသုံးပြုပုံတဏှာပြီးတော့တိုက်တွန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့် Porn စွဲရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လို
Porn Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်သင်ျခြိုသွေးဆောင်နိုင်ပါသလား? ရှင်ပေါလု Kattupalli MD (2016) က
လိင်၊ Warren Binford | TEDxSalem (2017)
porn သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာပြောင်းလဲသလဲ? (တစ်မိနစ်ဗီဒီယို)
ဘာကြောင့်လဲ Porn အတွက်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲ | NoFap ၏သိပ္ပံ [SFW] ။ 17 မိနစ်ယူကျု့ဗီဒီယို (2017)
Donald L. ဟီလ်တန်, ဂျူနီယာ, MD | အစေခံကျွန်၏လူဦးရေ: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, ထိုဦးနှောက်နှင့်စွဲလမ်းမှု (2019)
Stefanie Carnes ပါရဂူဘွဲ့ | compulsive နှင့်စှဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အဆိုပါအငြင်းပွားမှု, Diagnosis နှင့်ကုသမှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2019)
နိုင်ငံရေး၊ လိင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစွဲစွဲလမ်းစေနိုင်တဲ့ Dopamine ဆေးဝါးဒံယေလ Z. Lieberman, MD
ကျွမ်းကျင်သူများကို“ Porn Conversation” (မာ့ခ်ပိုဆန်) MD၊ PhD၊ ဒေါက်တာ Carolyn West; ဒေါက်တာ Gail Dines; လိင်ကုထုံးဆရာ Jo Robertson (သြဂုတ်၊ ၂၀၂၀)
စွဲ Related သိပ္ပံ
စွဲရှင်းလင်းချက် ဒေါက်တာ Kevin McCauley သည်ရှုပ်ထွေးသောအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံသဘောတရားများကိုနားလည်ရလွယ်ကူသောပုံရိပ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်
ဦး နှောက်အတွက်လမ်းကြောင်းဆုလာဘ် - khanacademymedicine - ဆုလဒ် circuit နှင့် dopamine ကိုလွယ်ကူစွာအသေးစိတ်ကြည့်ရှုပါ
သည်းခံစိတ်နှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း - khanacademymedicine - dopamine နှင့် dopamine receptors များကိုထိန်းချုပ်ခြင်း။
Dopamine ၏ဆုအတွက်အခန်းကဏ္ ((၃ မိနစ်)
ထိပ်တန်းသုတေသီများ dopamine ရှင်းပြ: အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် Nora Volkow အာဒံ Kepecs စွဲအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းပြပါ။ Dopamine dysregulation porn စွဲအပါအဝင်အားလုံးစှဲမှဗဟိုဖြစ်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်မှု / ဆုကြေးစင်တာတွင်အစောပိုင်းစမ်းသပ်မှု: ဦးနှောက်၏အပျြောအပါး / ဆုလာဘ်စင်တာများပေါ်ကျော်ကြားအစောပိုင်းစမ်းသပ်မှုအပေါ်ခြောက်မိနစ်ဗီဒီယိုက။ လူသားများနှင့်ကြွက်နှစ်ဦးစလုံးပါဝင်သည်။ တကယ်ပဲအားလုံးစှဲနောက်ကွယ်မှသောအရာကိုအသက်ရှင်ခြင်းတတ်၏။
Dopamine မျှော်လင့်အကြောင်းပိုမိုဖြစ်ပါသည်: ဒေါက်တာရောဘတ် Sapolsky:“ ဆု” နှင့် dopamine အကြောင်းရှည်သောဟောပြောချက်အပိုင်းငါးမိနစ်။ အထူးသဖြင့်မသေချာမရေရာမှုများပါ ၀ င်ပါကဆုလက်ဆောင်ရရန် Dopamine သည်မြင့်တက်လာသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေခြင်း၊ နှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်တွေ့ရှိရမည့်အရာအတွက်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်မသေချာမရေရာခြင်းများဖြစ်သည်။
လိင်, မူးယစ်ဆေးဝါး, ဦးနှောက်နှင့်နိုင်ငံရေး (ပါမောက္ခ Fred သည် Toates) လှုံ့ဆော်မှုဦးနှောက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုဆန္ဒများကိုပုံစံသွင်းသွင်းဘယ်လိုအငြိမ်းစားပါမောက္ခများကသင်ကြား။
"စွဲ၏ ဦး နှောက်သိပ္ပံ၏အခြေခံများ" - Gabe Deem မှ ၅ မိနစ်ဗီဒီယို
သိပ္ပံ - သွယ်ဝိုက်ဆက်စပ်မှု
TEDx ဆွေးနွေးချက် - အဆိုပါအပျြောအပါးထောင်ချောက်: TEDxFremont မှာဒေါက်ဂလပ် Lisle
Primal ဗီဇအတိုင်းသင့်ရဲ့အပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုး, တယ်ရီ Burnham, Ph.D ဘွဲ့ကို: သင်၏ဘိုးဘေးတို့အပေါ်ကအပြစ်တင်
gadget နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု, SourceFed (2012)
ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ရေး: TEDxDuke မှာဒန် Ariely
လူမှုနည်းပညာသုတေသနလဒ်အဲလက်စ် Wolf အားဖြင့်, (2019) တတ်နိုင်ဖို့အရမ်းကျယ်ပြောလှသောဖြစ်လာကြပြီ
အဆိုပါဦးနှောက်တွင် porn: ဗြိတိန် channel ကမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် 4.
Porn ပေါ်ရှိဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက် - Nightline (ABC)
ဒေါက်တာ Oz ကိုပြသပါ porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဇန်နဝါရီလ 31, 2013 အမှာစကားပြောကြား
'Generation X-Rated' (Porn-inced ED)၊ 16 ×9ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်း
TYT တက္ကသိုလ် - အပြာစာပေစွဲလမ်းမှု၏ဆိုးကျိုးများ
လူငယ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသော ED (၂၀၁၁) - ဤလေ့လာမှုတွင် ၃ မိနစ်“ သတင်းအစီရင်ခံစာ” ကိုဆွေးနွေးကြသည် လေ့လာချက် အီတလီ Andrology ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Porn Free - ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ခြင်း (SBS2Australia) - r / nofap အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ဇာတ်လမ်းပြောပြ5မိနစ်တွင်ဗီဒီယို
လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်အတွက် Porn-သွေးဆောင် ED အပေါ်သတင်းအစီရင်ခံစာ
အမျိုးသားများအတွက်: သူတို့ရဲ့ပုံပြင်, အကြံဉာဏ်နှင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များ
YourBrainRebalanced podcasts များ / ဗီဒီယိုများ
porn စွဲနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် (နောဧသည်အဆိုပါနက်နဲသောအရာထောင့်ကွက် Show မှာဘုရားကျောင်း BE)
Porn စွဲ၏သိပ္ပံ - Gabe ရဲ့ပုံပြင်
NoFap - Nofap မတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ဘဝ။ အမေရိကရှိအနက်ရောင်ဖြူ Guy ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
Terry Crews - Dirty Little Secret 1, အပိုင်း 2, စိတျအပိုငျး3နှင့် အပိုင်း ၅ (ရေဗက္ကာပြောသော)
ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်းလိင်မဆက်ဆံရဟု ?? Terry Crews မှလိင်အစာရှောင်ခြင်းအပိုင်း ၁
Porn စွဲ မှစ. SuperSet.Ted (121 ရက်ပေါင်းမျှ PMO) မှ
ထာဝစဉ် Porn Quit ရန်ကဘယ်လို
Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် (ဤ CraZZy ဖြစ်ပါတယ်!); Menprovement အားဖြင့်
porn ပြန်လည်နာလန်ထူအပေါ်အုတ်အိမ်ဗီဒီယိုစီးရီး။ အပိုင်း 1 - မေးခွန်း - ဖျော်ဖြေမှုနှင့်ရယ်စရာ။
No Angels // Porn, Sex & Love အကြောင်းဂီတဗီဒီယို (Jason Chu)
တစ်ဦးကအစွမ်းထက်စွဲ။ jahana75 (NoFap.org) က
Nofap မိန်းကလေးများရန်သင့်အားပိုမိုဆွဲဆောင်မှုကို? တစ်မိန်းကလေးကိုမေးပါ! အမေရိကမှာတော့အနက်ရောင်အဖြူရောင် Guy အားဖြင့်
porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED) မှဘယ်လောက်ကြာ recover သလော နောဧသည်ခဘုရားကျောင်းအားဖြင့်
YBOP တည်ထောင်သူဂယ်ရီ Wilson ကနောဧသည်ဘုရားကျောင်းအသုံးပြုပုံ Reader ကိုမေးခွန်းများအဖြေများ, အားလုံးပြောပြ
က porn စွဲမှပြန်လည်ထူထောင်စဉ် masturbate မှ OK ကိုလား? (Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု, အော်ဂဇင်, karezza)
နောဧသည်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့် NoFap အောင်မြင်မှု (compulsive porn အသုံးပြုမှုကိုဖြတ်) ရန် Key ကို,
စွဲခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း ၁၀၁: အမေရိကရှိ Black White Guy မှ
စိန်ခေါ်မှုများ reboot: Porn ထံမှထွက်သွားလက္ခဏာများ, ဂါယူဆပါသည်အားဖြင့်
နယူးဇီလန်အထက်တန်းကျောင်းအားဖြင့်ဖျော်ဖြေ porn အကြောင်းကို Play
TEDx ဟောပြောချက် - Paula Hall က“ ငါတို့လိင်စွဲလမ်းမှုအကြောင်းပြောရန်လိုအပ်သည်”
တစ်ဦး Pornified ယဉ်ကျေးမှုအတွက် Up ကိုကြီးထွားလာ | | GAIL Dines TEDxNavesink
porn သစ်ဆေးရွက်ကြီး | ဂျက် Fischer | TEDxBinghamtonUniversity
ကမ္ဘာ့လမ်းခရီး - အုတ်အိမ်ရာသီ ၂ (ဗီဒီယို)
ဂျယ်ရီကမင်္ဂလာပါ - အုတ်အိမ်ရာသီ2(ဗီဒီယို)
အုတ်အိမ် - ရာသီ ၂ ၏နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲ
Porn - ဂျိမ်းစ်မာရှယ်ကဘာကြောင့်မင်းရဲ့လိင်ဘဝကိုပျက်စီးစေတာလဲ - ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ထားသောဗွီဒီယိုသည်“ ငယ်ရွယ်သော” မျိုးဆက်နှင့်သက်ဆိုင်သည်
Masturbate ရန်ကဘယ်လိုအကြောင်းအမှန်တရား - sexpert အဲလက်စ်အယ်လ်မန်သည်
Porn စွဲရှင်းပြသည် - ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်၎င်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ (ဂျာမန်)
Psychotherapist porn စှဲလမျးသူအကြံပေး.
အင်တာနက်က Porn Simulator (Southpark) - ကလစ်ကလစ် Southpark။ ၏ရယ်စရာပုံဖော်ခြင်း သည်းခံစိတ်ဖြစ်ရပ်ဆန်း porn အသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင် (တင်းမာမှု) ။
အမျိုးသမီးများနေ့ @Hodgetwins နှင့်အတူအကြှနျုပျ၏စိုက်ထူဖျက်ဆီး porn
အဓိက Advertising ကြော်ငြာအတွက် NoFap: က Short, ရယ်စရာကလစ်တခုကိုစွမ်းအင် patch ကိုကြော်ငြာ။
Southpark: စာတန်ကစွဲလမ်းမှုနှင့် dopamine ကိုရှင်းပြသည်
ရည်းစားငါ့ကိုအတူလိင်ရှိခြင်းနေချိန်မှာလူကြီး, Movies Watch ရန်လိုကွ! @Hodgetwins
Reboot လုပ်ခြင်း၊ NoPorn၊ NoFap ကိုရည်စူးသည့် YouTube လိုင်းများနှင့်ဖွင့်စရာစာရင်းများ
အဆိုပါ Reboot Nation - ဂါယူဆပါသည်အားဖြင့်
သန့်ရှင်းသောလိင်စီမံကိန်း - မာကု Queppet ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
FAP နှင့်မျှမ pmo အဘယ်သူမျှမ - by mikkois
Nofap ဗီဒီယိုများ by zorosoro
NoFap သိကောင်းစရာများနှင့်သင်ခန်းစာများ - ဖြင့် ဂါဗြေလ Kalei Bocanegra
အုတ်အိမ် - Podcast
အဘယ်သူမျှမ Porn တော်လှန်ရေးတွင် - by ဒေါင်လိုက်စွဲ
Ted Carr ကအတူ NoFap
Nofap NoPMO: လိင် Transmutation - by အဆမဲ့ JC
stop FAP Institute က
Ahmed က Tabana
Porn သင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိုက်ကိုဘောင်ခတ်ပြောင်းလဲသလဲ? (စက်လှေကား)
အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျားသည်အင်တာနက် Porn (တိုတောင်းသောကာတွန်း) ဖြတ်နေ
ညစ်ညမ်းစွဲ: neuroplasticity များ၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတစ်ဦးက supranormal လှုံ့ဆော်မှု - ဒေါက်တာ Donald ဟီလ်တန်
“ စွဲလမ်းမှု ဦး နှောက်သိပ္ပံ၏အခြေခံများ” - Gabe Deem မှ ၅ မိနစ်ကြာဗီဒီယို
porn စွဲ (နယူးဇီလန်တီဗီ) ၏စစ်မှန်သောကုန်ကျစရိတ် - "ဒါဟာကလေးတစ်ဦးမှတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးပေးခြင်းနှင့်တူရဲ့"
ကျေးလက်နေလူထုများ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာကြည့်ခြင်း၊ ဦး နှောက်နှင့်စွဲခြင်းတို့ကို - Donald L. Hilton, Jr. မှထုတ်ဝေသည်။
နာမည်ကြီးများသည် ညစ်ညမ်း၏အန္တရာယ်များအကြောင်း လူသိရှင်ကြား ပြောဆိုကြသည်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံလူငယ်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: စာရင်းအင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ - Jeronym Krištof (ဗီဒီယို)
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် -“ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက် porn နှင့်စမ်းသပ်မှုမျိုးဆက်” (ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၀)
နှစ်ဦးသုတေသီများအားဖြင့် Dopamine နှင့်စွဲမှု
Dopamine မျှော်လင့်အကြောင်းပိုမိုဖြစ်ပါသည်: ဒေါက်တာရောဘတ် Sapolsky
Dr. Don Hilton က porn ၏ ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှင်းပြသည်
ညစ်ညမ်းသည့်ကပ်ရောဂါမှလွတ်မြောက်ရန် - ကာတွန်းကားကာလေး
အပျော်အပါး / ဆု "စင်တာ" အပေါ်ကျော်ကြားအစောပိုင်းစမ်းသပ်ချက်
Neurobiologist ၏ Great Talk သည် Porn ၏ ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်း
ဘယ်လိုအကြှနျုပျ၏စိတျနှငျ့အတူ Porn ရှုပ်ထွေးပါသလား
Porn ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့ | Megan Maas | TEDxMSU
အင်တာနက်က Porn Simulator (Southpark)
ရဲ့ Porn Talk ကြစို့ | မာရီယာတော်များ | TEDxGöteborg
လိင် Make, Love မဟုတ်လော | ဟိုက်ကာ Melzer | TEDxStuttgart
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင်နို ၀ င်ဘာလနို ၀ င်ဘာလ
NOFAP သည်တိုက်ခိုက်မှုအောက်တွင်ရှိသည် (Fearless DAN မှဗွီဒီယို)
ဖိလိပ္ပုသည် Zimbardo: ယောက်ျားများ၏နိဂုံးကို? (2011)
တစ်ဦး supernormal လှုံ့ဆော်မှု (တိုတောင်းသောဗီဒီယို) အဖြစ် porn
Remojo Podcast: Mary, Sharpe နှင့် Darryl Mead တို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လိင်နှင့်အင်တာနက်
Slam ကဗျာဆရာ porn စွဲဖျောထုတျ!
Neurosurgeon ရဲ့ Porn ရဲ့ ဦး နှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုအကြောင်းပြောဆိုပါ
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် Porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်း Tantra Yogi
TED ဟောပြောချက် - အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် Casper Schmidt က“ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာပြdisနာကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ
ဆယ်ကျော်သက် Porn စွဲ
ဘာကြောင့်လဲ Porn [SFW] ကဦးနှောက်ပြောင်းလဲ။ 17 မိနစ်ယူကျု့ဗီဒီယို
ဘာလို့ porn အကြောင်းပြောဖို့လိုတာလဲ Jo Robertson က TEDxChristchurch
“ နည်းပညာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်ကိုပျက်စီးစေသလော” (ဟာသဗဟို)
“ သုတေသန - အသက် ၄၀ နှစ်အောက်အမျိုးသားများတွင် ED ကိုအထောက်အကူပြုစေသောဆေးစွဲခြင်း” (ဗီဒီယိုတို၊ SFL-TV)
Menprovement မှ“ သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက် (ဤသည် CraZZy!)” ဖြစ်သည်
တစ်ဦးကအစွမ်းထက်စွဲ။ jahana75 (2014) က
porn ပြန်လည်နာလန်ထူအပေါ်အုတ်အိမ်ဗီဒီယိုစီးရီး။ အပိုင်း 1 - မေးခွန်း
Porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် - ကလစ်ပ် preview
ဒေါက်တာ Don Hilton - Austin, 2014
ဒေါက်တာဒရူးနှင့်လူရွှင်တော်မာ့ခ်မာရွန်တို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ (၃ မိနစ်)
Dr. Jay Geidd - Neuroimaging မှဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှု (2016)
Porn အပေါ် Excellent ကနယူးဇီလန်ကို TV Show ကို
ဂျယ်ရီကမင်္ဂလာပါ - အုတ်အိမ်ရာသီ ၂ (vid)
အလွန်အကျွံ porn အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. Kickstarter!
နောက်ဆုံးခေါ်ဆိုခ! ယင်းနောက်တွဲယာဉ် Watch နှင့်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရန်ပုံငွေကူညီ
MTV ၏ Charlamagne နှင့်မတူထူးခြားသည့်အရာ - ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုပြသထားသည်။
Porn - ဂျိမ်းစ်မာရှယ်ကဘာကြောင့်မင်းရဲ့လိင်ဘဝကိုပျက်စီးစေတာလဲ
porn စွဲနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး 101: အမေရိကမှာက Black အဖြူရောင် Guy အားဖြင့်
Porn စွဲရှင်းပြသည် - ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်၎င်းအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ (ဂျာမန်နှင့်အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုး)
porn အခမဲ့: တစ် porn စွဲ (SBS2Australia) မှဆယ်
porn သင့်ဦးနှောက်ကျဉ်းမြောင်း! Discovery သတင်းများအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
ဂါယူဆပါသည်အားဖြင့် porn ဒဏ္ဍာရီ
porn: အဆိုပါနယူးဆေးရွက်ကြီး | ဂျက် Fischer | TEDxBinghamtonUniversity
Psychotherapist porn စှဲလမျးသူအကြံပေး
Reboot စိန်ခေါ်မှုများ: Gabe Deem က "Porn မှထုတ်ယူခြင်းရောဂါလက္ခဏာများ"
ဦး နှောက်အတွက်လမ်းကြောင်းဆုလာဘ် - khanacademymedicine
streaming porn ရောက်ရှိလာခဲ့ကတည်းက Jon Ronson ၏တိုတောင်းသောနောက်တွဲယာဉ်လူပျိုတို့အတွက်ပညာရေးအတွက် 100% မြင့်တက်ဆွေးနွေးခြင်း
Porn စွဲနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (နောဧသည်ဘုရားကျောင်း) ၏ဇာတ်လမ်းကို
TEDx ဆွေးနွေးချက်“ လိင်၊
Terry Crews - Dirty Little Secret 1
Terry Crews - Dirty Little Secret 2
Terry Crews - ညစ်ပတ်နေတဲ့လျှို့ဝှက်အပိုင်း ၅ (ရေဗက္ကာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသည်)
တယ်ရီလေယာဉ်အမှုထမ်းများ - အရှက်ကွဲခြင်း! - (Dirty Little လျှို့ဝှက်အပိုင်း ၄)
Terry Crews: ညစ်ပတ်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အပိုင်း - အပိုင်း ၃
အဆိုပါအပျြောအပါးထောင်ချောက်: TEDxFremont မှာဒေါက်ဂလပ် Lisle
သည်းခံစိတ်နှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း - khanacademymedicine
Video - Porn Porn Forever
ဗီဒီယို - NoFap ရက်ပေါင်း ၅၀၀! - လူတိုင်းသည် NoFap ရှိသင့်သလော။
ဗွီဒီယို - Nofap ကသင့်ကိုမိန်းကလေးများပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်မည်လား မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုမေးပါ အမေရိကရှိအနက်ရောင်ဖြူ Guy ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
ဗီဒီယို - စွဲစွဲလမ်းသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့်“ To Beast to How” မှ Porn စွဲခြင်းကိုမည်သို့ဖြတ်မည်နည်း။
ဗီဒီယို - အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်စွမ်းရည်သိပ္ပံ (၂၀၁၇)
သငျသညျယခု (က Man Talk ကို TV က) NoFap ပွုလုပျခွငျး Start သငျ့ပါအဘယ်ကြောင့်